Adore Cricket Stuart Broad
Izithuba ezifakiwe: Stuart Broad
0 Amanqaku Yokucingisiswa Emva Ivula Ilahleko
ipapashwe 18th EyeKhala 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Phakistan, Test Cricket. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Enye vavanyo, England sibanye nil-phantsi. Hee Pakistan
Ukurhoxa iSri Lanka ecaleni kweNgilani kuphakathi kovavanyo olunamandla oluqinileyo ngokuchasene nePakistan ye-Pakistan. Kwaye ke iindwendwe ekwenzile nabanye abaninzi baye basilela mvanje, i.e. ukubonisa ubuthathaka eNgilani.
Mhlawumbi ubuthathaka obuphambili eNgilani kukusilela kwesipinatshi somgangatho ophezulu. U-Moeen Ali uluncedo kwii-overs ezimbalwa ezilungileyo kwaye ujwayele ukumangaliswa amalulwane amaninzi kwaye abaqhathe ukuba babe nolwazi olungeyonyani lokhuseleko.. Ngu, kunjalo, ispinatshi sesibini. Ukuba uthe akaba bat wayeza kuba ecaleni? akuthandeki. Yena enokukhethwa ukhuphelo, ungakhokeleli kwinto yohlaselo. Njani kwaye kutheni i-England ikhethe ukungamnaki u-Adil Rashid uyandimangalisa. Kumashumi eminyaka abakhethiweyo besiNgesi babonakalise ukungathandabuzi kwi-pig leg-spinners kwaye uRashid ubonwa njengoyena mntu unokufumana iimbaleki ezimbalwa - kodwa uqinisekisile kwii-ODI nakwi-T20s ukuba uyakwazi ukuyigcina iqinile. Ngombulelo baye babonisa ukuba bazimisele ukubeka eli lungelo ngokuthi bamnike igama 13 umntu squad ngenxa lwesibini uvavanyo. Bamele bamkhethe-ngakumbi njengo-Old Trafford bathambekele ekukhuthazeni abo babini. I-England banento yokwenza nengxaki ezandleni zabo - ndiyakrokrela ukuba u-Ben Stokes kunye no-Moeen bayayilwela indawo enye..
0 ngesibetho kuqala eNgilani
ithunyelwe 21st EyeNkanga 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi uthuthu.
Uthuthu ke luphinde lwaqhubeka kwakhona kwaye akukho kumangalisa okukhulu kude kube ngoku. I-Australia iphumelele i-toss kwaye yahlaselwa, I-England iphume nebhola kwaye yenza ubomi bube nzima kwi-avareji ephezulu yokujonga ukubetha kwe-Australia. Indoda yosuku ngaphandle kwamathandabuzo uStuart Broad, obefanele ukuba uthule bonke ngoku kodwa engoyiki kakhulu kubagxeki bakhe. Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Ostreliya, eNgilani, Uvavanyo lokuqala, Stuart Broad, uthuthu, The Gabba
2 Kanye okungenanto kokucinga: darren Lehman
ithunyelwe 21st EyeThupha 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi uthuthu.
NguDarren Lehman, Umqeqeshi we-Aussie, icele uluntu I-Aussie ukuba lunike uStuart Broad ixesha elinzima xa iNgilane iya kudlala i-Ashes yothotho ebusika. Senza ntoni apha eAdoreCricket? kakuhle, masiqale ngokucaphula ngokuchanekileyo u-Lehman.… Funda Inqaku Pheleleyo
tags: darren Lehman, Stuart Broad